Nkwupụta nzuzo - GBL Europe BV
Banyere GBL Europe BV
GBL Europe BV na-agbaso na Iwu Nchedo Data 1998 (DPA) yana Iwu Nzuzo na Nzuzo (EC Direction) 2003, yana Iwu Nchedo Data Izugbe, webatara na May 2018.
Amụma nzuzo a metụtara weebụsaịtị ọ bụla nwere nke GBL Europe BV.
Kedu ozi anyị na-anakọta gbasara gị?
Anyị na-anata gị ozi mgbe ị mezuru ụdị ndebanye / ndebanye aha na anyị, ma ọ bụ n'ịntanetị ma ọ bụ na offline, gbasara ngwaahịa na ọrụ anyị, gụnyere (mana ọnweghị oke): ịnweta akwụkwọ ozi email anyị; itinye anyị ụdị nkwalite ọ bụla; ma ọ bụ ịbanye na ahịa anyị.
Ozi anakọtara nwere ike ịgụnye: aha gị, adreesị ozi-e, adreesị nzipu ozi, akara ekwentị, aha ọrụ, yana nkọwa usoro.
Anyị na-edekọ mkparịta ụka na akwụkwọ akụkọ email anyị (dịka mmeghe na pịa) iji nyere anyị aka tụọ arụmọrụ nke nkwukọrịta gị na gị.
Mgbe ị gara na websaịtị anyị, enwere ike ịnakọta ozi ụfọdụ na ngwaọrụ gị na akpaghị aka. Ihe omuma a otutu gụnyere: Adreesị IP, ụdị ngwaọrụ, nọmba ID ngwaọrụ pụrụ iche, akara mkpịsị aka, ozi nbanye, ụdị ihe nchọgharị na ụdị, mpaghara mpaghara oge, sistemụ arụmọrụ na ikpo okwu, ọnọdụ mpaghara, na ozi teknụzụ ndị ọzọ.
Anyị nwekwara ike ịnakọta ozi gbasara otu ngwaọrụ gị si mee ihe na weebụsaịtị (s) ndị ahụ, gụnyere ibe ndị enwetala, ụbọchị nleta na oge, ogologo nleta na ibe ụfọdụ, ozi mmekọrịta peeji, yana ozi mmalite.
Anyị nwekwara ike ịnakọta ozi gbasara gị iche mgbe ị nwetara ụfọdụ ụdị ọdịnaya, dị ka akwụkwọ ọcha ma ọ bụ mkparịta ụka nkata ndụ, ma ọ bụ mgbe ị banyere asọmpi ma ọ bụ nyocha zuru ezu.
Ọ bụrụ n’itinye aha, enwere ike ijikọ profaịlụ gị na data edeburu na mmekọrịta mmekọrịta saịtị.
Kedu otu esi achịkọta Ozi?
Kpọmkwem mgbe emepụtara akaụntụ onye ọrụ.
N ’ụzọ d ị iche, site na ịgagharị nyocha, ngwa weebụ na ihe ndị ọzọ.
Iji akara nbanye-ị nwere ike ịhọrọ ịmepụta akaụntụ iji profaịlụ mmekọrịta dị adị. A ga-ajụ gị ma obi dị gị ụtọ ịkọwapụta ihe ndị bụ isi na sistemụ anyị iji mezue nkọwa akaụntụ gị.
A na-anakọta ozi weebụ site na iji kuki (lee n'okpuru).
Kedụ ka anyị ga-esi jiri ozi gbasara gị?
Anyị na-anakọta ozi gbasara gị iji nyefee ngwaahịa na ọrụ anyị maka gị nke ọma yana ọfụma. Anyị nwekwara ike, site n'oge ruo n'oge, ịkpọtụrụ gị site na post, ekwentị ma ọ bụ email gbasara ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ anyị chere na ọ nwere ike ịmasị gị, ma ọ bụ site na GBL Europe BV ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ nọ n'etiti ndị otu GBL Europe BV.
Anyị na-eji ozi anakọtara site na weebụsaịtị iji hazie nlegharị nlegharị ọzọ na weebụsaịtị anyị, yana ịnakọta data maka ebumnuche nyocha ọgụgụ.
Anyị agaghị eso ndị ọzọ kerịta ozi gị na-enweghị nkwenye mbụ gị.
Enwere ọnọdụ ụfọdụ, dịka mgbe ị na-enweta ụfọdụ ụdị adịchaghị ọdịnaya (dịka akwụkwọ ọcha ma ọ bụ webcast), mgbe anyị ga-enyefe nkọwa gị maka ndị ọzọ. A ga-agwa gị ka ị kwenye n'omume a iche na oge ọ bụla, ị nwere ike họrọ ịhapụ ịnweta ụdị ọdịnaya ahụ ma ọ bụrụ na ịchọghị ka ekesara nkọwa gị.
Ọ bụrụ na ịhọrọ, dịka akụkụ nke ndebanye aha gị, iji nweta onyinye pụrụ iche na ozi sitere na ndị ọzọ, anyị nwere ike zitere gị ozi, site na email, na nnọchite ndị ọzọ ahọpụtara. N'ọnọdụ ndị a, a naghị ekerịta email gị na onye ọ bụla, ụdị ozi ịntanetị ọ bụla ga-esite n'aka anyị ozugbo.
Ọ bụrụ n ’ịhọrọ ịnata ụdị onyinye ndị a pụrụ iche na ozi site na post na / ma ọ bụ ekwentị, nkọwapụta kwesịrị ekwesị (ma ọ bụ adreesị nzipu ozi ma ọ bụ akara ekwentị naanị) ga-eso ndị ọzọ nọ na ajụjụ ahụ. Ndị ọzọ a nwere ikike ịbanye na nkwekọrịta anyị iji hụ na ejiri data dị otú ahụ naanị maka otu ebumnuche ahụ ma ejighi ya ma ọ bụ kekọrịta ya ọzọ.
Ingnweta ozi na mmasị gị
Ndị ahịa niile edebanyere aha na ndị natara akwụkwọ ozi email anyị nwere akaụntụ anyị. Akaụntụ gị na-enye gị ohere ịhọrọ ozi ịnata n’aka anyị, yana otu i si enweta ozi ahụ. Nwere ike wepu akwụkwọ ozi ọ bụla na oge ọ bụla.
Shapụ idebanye aha yana ikike gị ka echefue
Ọ bụrụ n ’ị chọghị ịnata ihe ọ bụla n’aka anyị, nhọrọ gị dị ka ndị a:
Lelee igbe 'Wepu aha' n'ime akaụntụ gị. Anyị ga-ejigide nkọwa gị, mana anyị ga - ejide n'aka na ị na - egbochi gị na ndepụta ndị ọzọ anyị nwere ike inweta na ụbọchị ọzọ. Gaghịzi enweta nkwukọrịta site n'aka anyị.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ igosipụta ikike gị ka echefue gị, ịkwesịrị email info@gbl-europe.com ma rịọ maka ka ehichapụ akaụntụ gị kpamkpam. Agbanyeghị, n'ihi na anyị agaghị enwe ndekọ gị na nkọwa gị, enwere ike ị nwere ike mechaa nweta nkọwa gị dịka atụmanya (n'okpuru 'iwu ziri ezi'), yabụ ị nwere ike ịnweta ozi n'aka anyị oge ụfọdụ n'ọdịniihu .
A na-eji kuki na saịtị Weebụsaịtị anyị iji wepụta ahụmịhe nke ọma. Anyị na-eme nke a site na itinye obere faịlụ ederede na ngwaọrụ gị ka ị soro otu i siri jiri webụsaịtị ahụ, ka ịdekọ ma ọ bụ tinye ma ị hụla ozi anyị gosipụtara, ime ka ị banye na weebụsaịtị, ebe ọdabara, soro uzo, ma gosipụta mgbasa ozi ma ọ bụ ọdịnaya.
Achọrọ ụfọdụ kuki iji nwee ọ enjoyụ na iji arụmọrụ zuru oke nke weebụsaịtị (s) anyị.
Weebụsaịtị ndị ọzọ
Ebe nrụọrụ weebụ anyị nwere njikọ nke weebụsaịtị ndị ọzọ. Amụma nzuzo a na-emetụta naanị weebụsaịtị a yana Weebụsaịtị ọ bụla nke GBL Europe BV nwere. Ọ bụrụ, n’oge ị gara na webL GBL Europe BV, pịa pịa njikọ nke weebụsaịtị nke atọ, ị ga-akpachara anya gụọ iwu nzuzo nke onwe ya, nke nwere ike ịdị iche na nke anyị.
Anyị na-edebe iwu nzuzo anyị n'okpuru nyocha mgbe niile ma anyị ga-etinye mmelite ọ bụla na ibe a. Emelitere iwu nzuzo a na 08 August 2018.
Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịnwee ajụjụ ọ bụla gbasara iwu nzuzo anyị ma ọ bụ ozi anyị gbasara gị:
Site na email: info@gbl-europe.com
Site na post: